Phandeeyar Blog Page 2
October 31, 2017 Hsu Yee Htike #accelerateMM, Entrepreneurship, Events, Tech
October 30, 2017 Hsu Yee Htike Uncategorized
Phandeeyar Accelerator is incredibly excited to announce the startups for Cohort 2. After months of planning and preparation, recruitment, pitching events, and more, we are proud to introduce you to the7amazing startups from Yangon and Mandalay.
Each startup will receive USD 25,000 seed money, over USD 200,000 worth…
MVP တည်ဆောက်ရာတွင် အနဲဆုံး…
ထို့ကြောင့် ကနဦး စိတ်ကူးစိတ်သန်းများသည် လုပ်ရင်းကိုင်ရင်း စျေးကွက်နှင့် ကိုက်ညီသည့်…
September 29, 2017 Hsu Yee Htike #accelerateMM, Entrepreneurship, Founders, Marketing, Media, News, Startups, Tech
Freemium Model / အမြည်းပေး အရောင်း ပုံစံ
သင့်မှာ နွားတစ်ကောင် ရှိသည်။
နွားနို့ကို အခမဲ့ အမြည်းပေးသည်။
နွားနို့ထည့်သည့် ဘူး အတွက်သာ ပိုက်ဆံ ယူသည်။
ဝန်ဆောင်မှုအချို့အား အခမဲ့ အမြည်းပေးပြီး အပိုဆောင်း ဝန်ဆောင်မှုများအား ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာ။ Skynet (free to air channels),…